I-Royal Caribbean 'ihamba ngomkhumbi ingayi ndawo' igawulwe yiziphathimandla zaseHong Kong
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Ukuhamba ngesikebhe » I-Royal Caribbean 'ihamba ngomkhumbi ingayi ndawo' igawulwe yiziphathimandla zaseHong Kong
Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Ukuhamba ngesikebhe • Health News • Izindaba Ezintsha zaseHong Kong • Izindaba Zokunethezeka • Izindaba • Abantu • Unomthwalo wemfanelo • Ukuphepha • Ezokuvakasha • Transportation • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje
I-Royal Caribbean cruise-to-where igawulwe yiziphathimandla zaseHong Kong.
Uhambo 'lokungayi ndawo' luvumele kuphela abagibeli abagonywe ngokugcwele abahlolelwa ukuthi abanalo leli gciwane amahora angama-48 ngaphambi kohambo.
Umkhumbi wawuhlelelwe ukuthi uqale uhambo lokuya endaweni engenalutho, ukhawulelwe kuhhafu womthamo.
Ilungu elilodwa lomkhumbi ohamba ngomkhumbi kusolwa ukuthi linegciwane le-coronavirus ngemuva kokuhlolwa okujwayelekile.
Abagibeli bavunyelwe ukuphuma emkhunjini, njengoba bebengaxhumani ngqo nelungu labasebenzi.
I-Royal Caribbean I-Spectrum of the Seas cruise ship ivinjelwe ukuthi isuke esikhumulweni saseHong Kong namhlanje kusihlwa, njengoba kusolakala ukuthi ilungu labasebenzi bomkhumbi linegciwane le-coronavirus ngemuva kokuhlolwa okujwayelekile.
Ngokusho kwezikhulu zomzila ohamba ngomkhumbi, umkhumbi bekumele uqale uhambo “lokungayi ndawo” emanzini aseduze, ukhawulelwe kuhhafu womthamo futhi kubahlali abagonywe ngokuphelele abahlolelwe ukuthi abanalo leli gciwane amahora angama-48 ngaphambi kohambo.
Esitatimendeni ku Facebook, I-Royal Caribbean Wathi:
“Esivivinyweni esijwayelekile se-COVID-19 emalungwini eqembu namuhla, sihlonze ilungu elilodwa leqembu elihlole ngokungaziwa. Ngemuva kokuhlolwa kwesampula kwesibili, ukuhlolwa kuholele ekutheni bathole i-COVID-19.”
Abagibeli ababalelwa ku-1,000 1,200 XNUMX sebebonke base begibele umkhumbi ngesikhathi abaphathi bedolobha laseHong Kong beyalela ukuthi kuhoxiswe uhambo lobusuku obune.
Bonke abagibeli bomkhumbi kudingeke ukuthi bahlolwe okuyimpoqo kodwa bavunyelwe ukuphuma emkhunjini ngoba bebengaxhumani ngqo nabasebenzi.